Misoro yeNhau, 14 Kubvumbi 2019
Svondo 14 Kubvumbi 2019
VaMnangagwa Vanoti Vave neHukama Hwakasimba naVaMugabe Avo Vari Kurwara Vari kuSingapore
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaita hurukuro neZBC uye bepanhau reHerald ichaburitswa musi wa 18 Kubvumbi pazuva rekupemberera kuwana kuzvitonga kuzere.
MDC Yosarudza Vatungamiri kuManicaland
Bato reMDC riri kuita sarudzo dzakatarisirwa zvikuru nevakawanda mudunhu reManicaland.
Kubvumbi 12, 2019
Britain Yoronga Kuramba Yakatemera Zimbabwe Zvirango kuNyangwe Ikabuda muEU
Hurumende yeBritain inoti icharamba yakatemera zvirango Zimbabwe kunyangwe ikabuda mugungano reEuropean Union.
Varimi Vachena Vanoti Vanoda Kurimwa Minda kwete Zvivakwa Chete
CFU inoti hurumende inofanira kubhadhara minda kwete zvivakwa nezvimwe zvikwanisiro chete
VaChamisa Vodomwa neMatunhu Mashanu Kuti Vatungamire MDC
Nhengo dzebato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West yaodoma VaChamisa kuti vatungamire bato kubva pakongiresi uye VaCharlton Hwende kuti vakwikwidze chinzvimbo chemunyori mukuru.
VaMthuli Ncube Vopinda Mumisangano yeIMF neWorld Bank muAmerica
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube vari kupinda mumisangano yeWorld Bank neIMF yepagore kana kuti Spring Meetings muno muWashington DC.
Misoro yeNhau, Chishanu 12 Kubvumbi, 2019
Kubvumbi 11, 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Kubvumbi 11, 2019
MDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoita makongiresi ematunhu ayo,kusanganisira dunhu reMashonaland West iro rine mutauro mukuru pamaitirwo ekongiresi yaro zvichitevera kutyityidzirana nekudzingana kuri kuitika mubato iri.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kubvumbi 10, 2019
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanosangana nevakuru vakuru vemabhizinesi vachivakurudzira kuti vawedzere rubatsiro kuvanhu vakawirwa nedambudziko redutumupengo nemafashamu eCyclone Idai.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 09, 2019
Hurumende inoti yave nehurongwa hwekuti vana, kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yeGukurahundi, vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo pamwe nemagwaro ekuzvarwa senzira yekugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvange zviripo zvine chekuita nenyaya yeGukurahundi iyi.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Kubvumbi, 08, 2019
Amai Joyce Mujuru vanoti havana hurongwa hwekudzokera kubato reZanu-PF kunyangwe hazvo bato iri rakatumira nhumwa kuti dzivakumbire kuti vadzoke.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Kubvumbi 05, 2019
Masangano anobatsira oramba achienderera mberi nekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutumupengo reCyclone Idai mumatunhu eChimanimani neChipinge kuManicaland izvo zvaita kuti mimwe migwagwa nemazambuko zvichifambika.